बीमा | Corporate Nepal
सिङ्गल प्रिमियम पोलिसिमा कडाई, तीन वर्षअघि समर्पण गर्न नपाइने, धितोमा लिइने कर्जा रोक्का
काठमाडौं । बीमा समितिले सिङ्गल प्रिमियम पोलिसिमा कडाई गरेको छ । कडाई गरेसँगै अब जीवन बीमा कम्पनीका सिङ्गल प्रिमियम पोलिसिमा तीन वर्षसम्म समर्पण गर्न नपाईने भएको हो । बीमा समितिका प्रवक्ता एवम् कार्यकारी निर्देश…
रमेशकुमार भट्टराई जोखिममा आधारित पूँजी कोष कायम गर्न लगाई बीमा कम्पनीहरूलाई आन्तरिकरुपमा सवल र सक्षम बनाउने सोच नियमक निकायले बनाउन थालेको छ। यही सोचबाट फाइदा उठाउन तथा पूँजी बृद्धिलाई आधार बनाएर बीमा क…
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमाको गुणस्तरमा ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बोर्डले बीमाको गुणस्तर बढाउने बताएको हो । हालसम्म आफ्नो पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आए…
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एजीएमबाट ११.०५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौँ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २७औँ वार्षिक साधारण सभा आज सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ११.०५ प्रतिशतका दरले हुन आउने १९ करोड २३ लाख ३१ हजार ८…
बीमा समितिले सीए, तथ्यांकशास्त्री, सुचना प्राविधिकलाई नियुक्त गर्यो
काठमाडौं । बीमा समितिले पाँच जना कर्मचारी थपेको छ । समितिमा दुई जना चार्टड एकाउन्टेन्ट,(सीए) एक जना तथ्याकंशास्त्री तथा दुई जना सूचना प्रविधि कर्मचारी थपिएका हुन् । अति आवश्यक भएपछि विज्ञ सेवा करारमा कर्मचारीह…
अजोड इन्स्योरेन्सले इलाममा गर्यो कृषि तथा पशुपक्षी बीमा अभिकर्ता तालिम
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले इलाम बजार स्थित कम्पनीको शाखा कार्यालय ३ दिने कृषि तथा पशुपक्षी बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न भयो । उक्त तालिम कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विभागका विभागीय प्रमुख दिपक…
एशियन लाईफ १४औँ वर्षमाः ५ लाख ६८ हजार बीमालेख बिक्री गरी २८ अर्ब ८६ करोड प्रिमियम संकलन
काठमाडौँ । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड स्थापनाको तेह्र वर्ष पुरा गरी चौधौंं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कम्पनीले २०६४ चैत्र २१ गतेबाट कारोबार प्रारम्भ गरेको थियो । यस चौधौं वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा कम्पनील…
वीपीको बाल विभागलाई बीमा संस्थानको सहयोग
चितवन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गरिमा कडेल मेमोरियल ट्र्ष्टको संयोजनमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको बालरोग विभागलाई सहयोग सामग्री प्रदान गरेको छ । बाल मनोबिज्ञानला उत्प्रेरणा प्रदान गराउने…
प्राइम लाइफका सीईओको प्रश्न– अझै पनि जीवन बीमा किन गर्ने भन्ने बेला छ र ?
काठमाडौं । विगतमा जीवन बीमा किन गर्ने ? भन्ने विषयमा चर्चा र बहस हुने गथ्र्यो । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । परिस्थिति बदलिएको छ । हामीले बदलिँदो परिस्थितिअनुुसार आफूलाई पनि बदल्दै जानुपर्छ । अहिले त जीवन बीमा …